Porto Riko: Nasehon’ny Bilaogera fa Namboamboarina Ilay Dokambarotra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Desambra 2011 13:30 GMT
Vakio amin'ny teny Español, বাংলা, македонски, Filipino, English
Nisy dokambarotra iray nahitana ilay mpihira sy mpilalao sarimihetsika Porto Rikana Jennifer López mitondra Fiat 50 cc manerana ny lalan'i Bronx, New York, toerana nahitany masoandro sy nahalehibe azy. Milaza momba ny fiaviany eo amin'ny toerana sy ny aingam-panahy azony avy aminy i López.
Naseho eo amin'ny pejy ofisialin'ny Fiat ofisialy eo amin'ny YouTube ny lahatsary:
Monina eo amin'ny manodidina indrindra ny bilaogera Porto Rikana Ed Morales avy ao amin'ny edmorales.net. Nanatrika teo izy nandritra ny fakana sary ny dokambarotra ary nieritreritra hoe iza no nilalao ny toerana tokony holalaovin'ilay olo-malaza. Nanoratra izany izy tao amin'ny ‘Jenny Absent From My Block‘:
… ny tena marina dia tsy hita mihitsy ilay vehivavy mipetraka ao anatin'ilay fiara lazaina fa mitana ny lalao fototra ka mihevitra mihitsy aho fa misy misolo izy amin'io. Fa iza nefa ?
Naka sary mihitsy i Ed nandritra ny fanatontosana ny dokambarotra raha tsy nandeha araka ny tokony ho izy ilay fiara. Taorian'ny nijerena ny dokambarotra tamin'ny fahitalavitra no nahatonga saina azy fa hay mitovy amin'ilay famokarana hitany maso ihany izy ity ka nanoratany fa tsy teo mihitsy i López. Nalain'ny The Smoking Gun ny sariny ary nolazaina ihany koa tao amin'ny New York Times.
Simba an-dalana, Fiat amboarin'ny olona mitovy amin'i Jennifer Lopez eo amin'ny familiana fiara. (Sary avy amin'i Ed Morales)
Nitatitra [es] ny tantaran'i Morales ny tranonkalam-baovao Porto Rikana Noticel ary nilaza fa voatery nanaiky nampiasa ny olona mitovy amin'i López ny Fiat noho ny fandaharam-potoanan'ilay Porto Rikana.